बाबुरामलाई बोक्दा कांध गन्हाउंछ : केपी ओली – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १६:३१ English
बाबुरामलाई बोक्दा कांध गन्हाउंछ : केपी ओली
० तपाईं भारत गइरहनुहुन्छ नि, किन ?
– सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बङ्ग्याउन खोज्नु अलग कुरा हो । मैले किड्नीको प्रत्यारोपण गरेको छु । त्यसको फलोअपका लागि जाने गर्छु । कतिपय टेस्टहरू यहां हुंदैनन् त्यसका लागि पनि जानुपर्छ । बकवास गर्नेहरूले राजनीतिक उपचारका लागि भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । तर, म स्वास्थ्य उपचारका लागि नै समयसमयमा भारत गइरहन्छु । राजनीतिक उपचारका लागि म भारत गइरहनुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठान्दिनं । विद्या आर्जन गर्न, काम खोज्न, कोही व्यापारका लागि, कोही गोष्ठी–सेमिनारका लागि जान्छन् । कसैले यसो चिनजान छ भने राजनीतिक कुराकानी गर्लान् तर मचाहिं त्यसरी कहिले पनि गएको छैन ।
० नेपाली नेताहरू बारम्बार भारत गइरहन्छन्, त्यो संयोग मात्रै हो कि त्यसमा अर्थ पनि छ ?
– म त जांदै जांदैनथें । नेपालमा ट्रान्सप्लान्ट हुंदैन थियो र भारत गएको हुं । त्यसपछि नियमित परीक्षणमा गइरहन्छु । अब त्यहांका नेताहरूसंग, पदाधिकारीहरूसंग मेरो राम्रो चिनजान छ, भेटघाट त स्वाभाविक नै हो ।
० कस्तो कुराकानी हुन्छ ?
– नेपालको सम्बन्धमा छिमेकीहरूले यहांको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा रुचि लिन्छन्, यो अस्वाभाविक पनि होइन । तिनै विषयमा कुराकानी हुन्छन् ।
० राजनीतिमा त भारतको हस्तक्षेप छ भनिन्छ नि ?
– म त राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप देख्दिनं, तर मागियो भने, जे पनि गरिदिन्छु भन्यो भने होला तर मसंग कोही पनि भारतीयहरूले त्यसो भन्दैनन् । तपाईंहरूको कुरा हो तपाईंहरूनै गर्नुस् हाम्रो चासो त लोकतन्त्रमा मात्र हो भन्ने गर्छन् । लोकतन्त्र शान्ति र स्थायित्वका लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्नुस् भन्छन् ।
० नेपाली नेताहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइदिनुप¥यो भनेर भन्ने गर्छन् भनिन्छ नि ?
– खोइ, मैले त त्यो कुरा सुनेको छैन । दलहरूले एकातिर भूमिगत क्रान्ति गर्ने भनेर ट्रेन्च खनाउने अर्कोतिर सहयोगका लागि पत्र लेख्ने काम गर्छन् । यस्तो नाटक, तमासा र दोहोरो भूमिका मलाई ठीक लाग्दैन । माओवादीको बाहिरी कुरा एउटा हुन्छ भित्री व्यवहार अर्को हुन्छ, यो कुरा अब सबैले बुझिसके नि ।
० पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले भारतको तारिफ धेरै गरिरहनुभएको छ नि ?
– उहां अभिशप्त हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले त अझै बढी नै गर्नुपर्छ । बाहिर विरोध पनि बढी गर्नुपर्छ किनकि असली कुरा लुकाउन, भित्र भारतको दलाली पनि बढी नै गर्नुपर्छ । किनभने भारतको विरोधलाई डाइलुट गर्न पनि त दलाली बढी चाहियो । भारतको दलालीको कारणले माओवादीले सक्कली व्यवहार नै गर्दैन ।
० नेपालमा भारतको समर्थनबिना कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भनिन्छ नि ?
– म यस्तोखाले विषयवस्तुमा चर्चा पनि गर्न चाहन्न । नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने आत्मास्वाभिमान नभएका, गए–गुज्रेका तत्वहरूको मानसिकता हो त्यो । ती तत्वहरूले जहिले पनि त्यही गर्छन् । म त्यस्तो ठान्दिनं । म कसैको विषयमा भन्न चाहन्न, तर नेपालको सरकार नेपालीले बनाउनुपर्छ, नेपालीले नै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ, विदेशीको चाकडीबाट होइन । नेपाली जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेर टिक्नुपर्छ । म प्रधानमन्त्री बन्न भारत गएको भन्ने कुरा जवाफ दिनलायकको प्रश्नै होइन । यी राष्ट्रियता नभएको कुरा हो । तर, एउटा कुरा असल छिमेकीको सद्भाव त अवश्य चाहिन्छ । एउटा सरकार राम्ररी चलाउन संसारकै सबै देशसंग राम्रो सम्बन्ध त राख्नैपर्छ नि । हामी यहां भारत, चीन, युरोप, अमेरिकाविरोधी सरकार बनाउने होइनौं, नेपालका लागि काम गर्ने र सबैसंग राम्रो सम्बन्ध राख्ने सरकार निर्माण गर्नुपर्छ ।
० बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतको समर्थन थियो अरे नि ?
– भारतलाई पनि भ्रम थियो, त्यसैले बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग थियो होला † तर, अब भारतको समर्थन छैन । बाबुरामलाई अहिले बोक्दा कांध पनि गन्हाउंछ । मैले भारतीय पक्षसंग कुरा गर्दा अहिलेको रिक्तता हुनुहुंदैन थियो, सहमतिविपरीत द्वन्द्वमा धकेलियो, संसद् रहन नदिने षड्यन्त्र भयो भन्ने भारतीयले बुझेका छन् । तानाशाही भारतको कारणले होइन त्यो माओवादीको मौलिक चरित्र हो ।
० अबको प्रधानमन्त्री को ?
– अब लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबाट राजनीतिक सहमतिमा अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ । मैले आफूलाई उम्मेदवार बनाएको छैन । तर, बनाइयो भने त्यसलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्छु । म ४८ वर्षदेखि क्रियाशील छु राजनीतिमा । नेपालको आरोह–अवरोह सबै भोगेको छु । म प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सकारात्मकपन सुरु हुन्छ । म प्रधानमन्त्री भएर फोटो मात्र झुन्ड्याउने पक्षमा छैन । हामीले अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहेका छौं । सबैभन्दा बढी सम्भावना काङ्ग्रेसको छ ।
० अहिलेको सरकारको आयु कति ?
– धेरै छैन । मिति तोक्दिनं, दशैंसम्म यो सरकार चल्दैन । दशैंअघि नै यो सरकार ढल्छ ।
० तपाईंको नेतृत्वलाई माओवादीले समर्थन गर्ला ?
– किन नगर्नु, हामीले उहांहरूको नेतृत्वलाई समर्थन गरेकै हो । उहांहरूले पनि गर्नुहुन्छ, तर मैले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुरा सोधेको छैन । प्रचण्डको बाहिरको अभिव्यक्तिलाई महत्वका साथ लिनुहुंदैन ।
० प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन कसरी हुन्छ ?
– उहां सहमतिका साथ नै जानुहुन्छ । भएन भने सहमतिको वातावरण बनाउन जानुहुन्छ ।
० सरकार टिकाउन मोर्चा नै बनिसक्यो नि ?
– सरकारी गठबन्धनको कुरा गर्नुभएको होला, त्यो सुन्दर मजाक मात्र हो । तपार्इंले केही दिनमै त्यो थाहा पाउनुहुन्छ के हुन्छ भनेर ।
२६ भाद्र २०६९, मंगलवार २२:१२ मा प्रकाशित